१ नम्बरको प्रदेशसभामा ७ विषयगत समिति गठन (कुन समितिमा को–को ?) | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश समाचार १ नम्बरको प्रदेशसभामा ७ विषयगत समिति गठन (कुन समितिमा को–को ?)
प्रदेश समाचार 176 views
१ नम्बरको प्रदेशसभामा ७ विषयगत समिति गठन (कुन समितिमा को–को ?)
चैत ३०, विराटनगर । प्रदेश नंं १ को प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली अनुसार ७ ओटा संसदीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेशसभाको बिहीवारको बैठकले ती ७ ओटा संसदीय समितिहरुमा रहने प्रदेशसभा सदस्यहरुको नाममा समेत सहमति जुटाएको छ ।
बैठकमा सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम घोषणा गरेका थिए । प्रदेशसभाले १७ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको न्याय, प्रशासन तथा बिधायन समिति, १३ सदस्य रहेको सुशासन तथ योजना समिति, ११ सदस्य रहेको अर्थसमिति र ९ सदस्य रहेको सार्वजनिक लेखा समिति गठन गरेको छ । यस्तै १३ सदस्य रहेको सामाजिक विकास समिति र ११ सदस्य रहेको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति र १२ सदस्य रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु र सभामुख तथा उपसभामुख बाहेक सबै प्रदेशसभा सदस्यहरु संसदीय समितिमा रहेका छन् । संसदीय समितिहरुले मिनी सांसदको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । समितिले कानून निर्माण प्रक्रिया र आफ्नो विषयगत सवालमा सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार राख्दछन् । मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायहरुबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक राय सल्लाह एवम् निर्देशन दिने अधिकार संसदीय समितिहरुलाई हुनेछ । प्रदेश सरकारले मस्यौदा गरेका कानूनहरु अब विधायन समिति हुँदै प्रदेश सभामा प्रवेश पाउँछन् ।
समितिका सभापतिहरुको चयन भने सम्बन्धित समितिले आफैं गर्ने प्रावधान छ । सभापतिको निर्वाचन सभामुखले तोकेको मितिमा गर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । सभापतिको चयन नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख भण्डारीले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक २०७४ प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएको जानकारी दिएका थिए ।
कुन समितिमा को–को ?
क) न्याय प्रशासन तथा बिधायन समिति
ख) सुशासन तथा योजना समिति
ग) अर्थ समिति
घ) सार्वजनिक लेखा समिति
ङ) समाजिक विकास समिति
च) उद्योग, पर्यटन तथा वतावरण समिति
मोहम्मद ताहिर मियाँ
नारायण बुर्जा मगर
च) प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति